Apple inononoka shanduko huru kuIOS kuti itarise pamabhugi | IPhone nhau
Iyo software yaApple isiri kuenda panguva yayo yakanakisa chimwe chinhu chinoonekwa mushure memashoko akaitika mukupera kwegore rapfuura, ayo achiri kuenderera aine echo pakutanga kwe2018. Zvokuchengetedza zvikanganiso, nyaya dzekuita, uye gakava sarudzo iyo yakaisa Apple pakati pechamupupuri chevashandisi vanorangarira nekudzokorora sirogani yekambani inozivikanwa, "Inongoshanda."
Zvinotaridza kuti mumakiromita epamusoro eCupertino vakaona kuti nguva yasvika yekuita chimwe chinhu uye vangadai vakasarudza. kunonoka kumwe kweshanduko huru Apple yanga ichironga kuita muIOS 12' Tinokupa iwe pazasi pazasi.
Nyaya yacho inoziviswa kwatiri naBloomberg uyo, sekureva kwaanoti, akagamuchira ruzivo kubva mukati mekambani. Apple yakanga yaronga kuvhura neIOS 12 shanduko huru mune inoonekwa yeiyo inoshanda sisitimu, ichisiya kamwechete uye zvese izvo grid yemifananidzo uye ichipa imba yekumba iyo ingatipe ruzivo rwakawanda, kunyanya iyo hombe skrini yeiyo iPad. Ini zvakare ndaida kuwedzera multimedia modhi yeAkawedzera Reality mitambo, uye kutanga nzira yekubatanidza kunyorera kweIOS uye macOS, chimwe chinhu chakambokurukurwa kwenguva. A new Photos application ine zvirinani algorithms yekuzvimisikidza, kuvandudzwa muFaceTime uye sarudzo nyowani dzevabereki kudzora dzinobvumidza vabereki kuziva kuti inguva yakadii vana vavo yavanoshandisa mune mamwe mafomu iripowo pane izvo zvakarongwa naApple zveIOS 12.
Pazvose izvi zvigadziriso, zvinoita sekunge Apple ichasiya kuitira gare gare shanduko mukiriniki yekumba, pamwe neiyo nzira yevazhinji yeAugmented Reality kana iyo nyowani Photos application. Dzimwe dzenyaya dzinoita senge panguva ino inoenderera neakarenda yakarongwa uye yaizosvika yekutanga kweIOS 12 pasina matambudziko. Chimwe chinhu chakafanana chichaitika ne macOS, kunyangwe padiki padiki, uye zvinoenderana neaya masosi kana tvOS kana watchOS zvichanonoka panguva. Apple inoda madhiragi kukonzera matambudziko kune vashandisi vayo nekuda kwesoftware, uye kana izvi zvichireva kuisa mabhureki pane dzimwe nhau, zvinoita kunge zvinoda kuzviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inononoka kuchinja kukuru kweIOS kuti itarise pane glitches
Apple inotipusisa isu tese uye hatidi kuiona
Iyi iOS 12 pfungwa inoratidza nyowani yekukiya skrini uye yevaenzi maitiro